काठमाडौं उपत्यकामा २ लाख ४९ हजार कोरोना संक्रमणमुक्त, संक्रिय संक्रमित कति ? « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं उपत्यकामा २ लाख ४९ हजार कोरोना संक्रमणमुक्त, संक्रिय संक्रमित कति ?
काठमाडौं, १० असार । बुधबार २४ सय २१ जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा ६ लाख २७ हजार ८५४ संख्या पुगेको छ । संक्रमित मध्ये ५ लाख ६८ हजार ४४० जना संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै संक्रमितको संख्या काठमाडौं उपत्यकामा रहेको छ । काठमाडौं जिल्लामा मात्रै हालसम्म २ लाख २ हजार ४८२ जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमित मध्ये १ लाख ९५ हजार ९२९ जनालाई संक्रमण निको भएको छ भने ४६ सय ९७ संक्रिय संक्रमितको संख्या रहेको छ । यसैगरी, बुधबारसम्म काठमाडौंमा १ हजार ८ सय ५६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै, ललितपुर जिल्लामा हालसम्म ३६ हजार ९ सय ५८ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन् भने ३३ हजार ८ सय ४३ जना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् । मन्त्रालयको अनुसार ललितपुरमा हालसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ सय ३७ रहेको छ । त्यस्तै, २५ सय ५८ संक्रमित उपचारको क्रममा छन् ।
उपत्यकामा सबैभन्दा थोरै संक्रमित भक्तपुरमा रहेका छन् । मन्त्रालयको अनुसार हालसम्म २१ हजार ९ सय ४९ जना संक्रमित रहेका छन् भने १९ हजार ६६६ जना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् । १९ सय २१ जना संक्रमितको उपचार भैरहेको छ भने ३६२ जनाको हालसम्म संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
उपत्यकामा कुल संक्रमित २ लाख ६१ हजार ३६९, २ लाख ४९ हजार ४३८ जना संक्रमणमुक्त, २७ सय ५५ जनाको मृत्यु र संक्रिय सक्रमितको संख्या ९ हजार १७६ जना रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।